Ny tombony azo amin'ny poti programmable | Bezzia
Maria vazquez | 12/10/2021 12:00 | lakozia
Fitaovana kely Manamora ny asanay isan'andro izy ireo ary tsy misy ankanavaka ireo vilany azo alahatra. Noho ny hafainganam-pandehan'ny fiainana ankehitriny dia voatery manao zavatra maro isika ao anatin'ny fotoana fohy ary ny vilany azo ampiasaina dia mamela antsika hampifanaraka ny asan'ny tokantrano sasany. Fa inona ny vilany azo programm?
1 Inona no atao amin'ny vilany?
1.1 Ny tsy fitovizany amin'ny mpanodina sakafo sy ny vilany crock
2 Tombony amin'ny vilany azo programm
Inona no atao amin'ny vilany?
Robot any an-dakozia, vilany misy programa, mahandro mangina ... fantatsika tsara ve izay tiana holazaina rehefa miresaka momba ireo fitaovana kely ireo isika? Na dia matetika aza isika mifandinika robot any an-dakozia, tsy mitovy izy ireo.
Vilany azo ovaina azo ovaina ny fandrahoana tsindry herinaratra. Ny endriny dia mitovy amin'ny an'ny fryer lalina: manana rakotra eo amin'ny tapany ambony izy ahafahanao mampiditra ireo akora, valizy mitovy amin'ny an'ny mpanao fahandro haingana nentim-paharazana, izay maka tahaka ny rafitra ary manafana ny therstatat.
Ireo vilany azo programmera koa dia misy tontonana eo aloha ao amin'ny tsy mila misafidy ilay programa irina fotsiny ianao. Amboarina izy ireo, endasina, etona, atsofohy, atsofohy ... ary ampahafantariny anao rehefa vita ny sakafo. Azo ovaina izy ireo, amin'izay ianao afaka manana ny sakafo vonona amin'ny fotoana nofidianao, araka ny nanaovana azy vao. Ahoana raha maty ny herinaratra? Tsy mila miahiahy ianao: rehefa miverina izy dia hanohy hatrany amin'ny toerana nialàny, noho ny fahatsiarovany azy.
Ny ankamaroan'ny vilany azo programmer koa dia manana safidy hafanana sy avereno, izay mamela anao tsy handoto lovia bebe kokoa. Ary mazàna dia manana bokotra mazava izy ireo hanadiovan-tena.
Ny tsy fitovizany amin'ny mpanodina sakafo sy ny vilany crock
Inona no maha samy hafa an'ity fitaovana ity sy ny robot any an-dakozia? raha mahandro «solo» azo vinavinaina azo andramana, ny robot any an-dakozia dia mandeha lavitra, koa manodina sakafo. Ireto dia, amin'ny robot an-dakozia dia azonao atao ny manety, manorotoro fametahana ... Ary ahoana ny a Vilany mahandro miadana? Efa niresaka momba an'ity karazana vilany ity hatry ny ela sy ela isika; Fomba nentim-paharazana izy ireo fa vilany herinaratra handrahoana amin'ny hafanana ambany.
Fahandroana miadana no fahatezerana rehetra
Tombony amin'ny vilany azo programm
Ny fahafantarana ny toetra mampiavaka ny vilany voarindra, dia mora ny maminavina ireo tombony atolotra antsika. Raha mahandro matetika ianao nefa tsy manam-potoana firy na maniry handany be, dia safidy tsy misy isalasalana ireo noho ireto antony manaraka ireto.
Tsotra izy ireo. Na iza na iza dia mahay mampiasa vilany voarindra. Mila apetakao fotsiny izy io, ampidiro ny fangaro, safidio ny programa fandrahoan-tsakafo ary miandry ny vonona ny lovia. Ny famoizam-po dia ho tsotra toy ny fanindriana bokotra iray.
Mampihena ny fotoana fahandroany izy ireo. Afaka mahandro toy ny amin'ny vilany nentim-paharazana ianao fa amin'ny fotoana fohy kokoa noho izy mahandro amin'ny tsindry mafy. Raha tsy mila mailo momba azy io dia handrahoina haingana ny loviao.
Aza mihinana herinaratra kely kokoa ary herinaratra noho ny vilany mahazatra. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny hafanana omena sy ny fotoana fandrahoana sakafo dia afaka manangona hatramin'ny 70% angovo ianao, izay hisy fiantraikany tsara amin'ny faktioran'ny herinaratrao.
Milamina izy ireo. Ireo vilany fandrahoana sakafo azo arindra ireo dia manana teknolojia izay mahatonga azy ireo ho azo antoka. Aza adino ny may sy ny tranga tsy ilaina ao an-dakozia noho ny tsindry tafahoatra. Manana rafitra mampitandrina anao izy ireo raha tsy mihidy tsara ny sarom-bilany ary manana rafitra famoretana mibontsina izy ireo, mba hialana amin'ny fahamaizana rehefa manokatra ny sarom-bilany. Ankoatr'izay, sorohinao ny mety hanadinoanao ny afo: mampitandrina anao izany rehefa vita sy mandeha ho azy vonoina rehefa vita.
Avelany ianao hahandro ny zavatra rehetra. Ny ankamaroany dia manana programa fandrahoan-tsakafo samihafa: turbo, tsindry, alikaola, laoka, fanjonoana, confit, vary, paty, lovia, endasina, endasina, lafaoro ... Ao anaty boaty ihany koa ny boky misy hevitra maro momba ny fanomanana ny sakafo isan-kerinandro. mora kokoa. Mipetraha mandritra ny 10 minitra isaky ny Alahady, mitadiava hevitra hanomanana ny menio mandritra ny herinandro iray manontolo ary hadinoy ny manontany tena isan'andro hoe inona no hataonao amin'ny ampitso.
Mahita vola be ho an'ny lakozia ao anaty vilany ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » lakozia » Ny tombony azo amin'ny poti programmable